USODOLOPHU WOMASIPALA UMZIMVUBU UCLLR SOBANE MNUKWA UZAKUNIKEZELA NGOKUSESIKWENI IBHOLORHO EZA KUXHUMANISA AMAPHANDLE ANGAPHAYA KWESITHATHU – Umzimvubu Local Municipality
Ngomhla weshumi elinesithandathu kwinyanga yeDwarha kwakulonyaka sikuwo, uSodolophu womasipala wasekuhlaleni uMzimvubu uCllr Sobane Mnukwa uzakunikezela ngokusesikweni ibholorho eza kuxhumanisa amaphandle angaphaya kwesithathu, nesekwe kwilali iMarhwaqa kwisithili saMaxesibe.
Kusemva kwethuba elide abahlali bale ward besebenzisa lomfula orhwaqelisayo ukufikelela kwiinkonzo abazifumana kwiidolophu, ukanti nezo zifumaneka kumasebe ohlukeneyo kuquka noMasipala lo.
Uthe akuqwalasela lemeko uMasipala waqalisa ukwakha ibholorho ethe yaxabisa izigidi zamarandi alithoba, nekuqukwa kuloomali umgaqo wokufikelela oozikhilomitha ezimbini. Kule projekthi kuvuleke amathuba engqesho angamashumi amathathu anesibini nekubalwa kuwo ulutsha namabhinqa alishumi elinesithandathu, abantu abakhubazekileyo ababini, abakhi abathandathu kwakunye namadoda asibhozo yaye singqumshela nje ibholorho igqityiwe. Ukanti kukwabalwa neziphaluka zayo iMarhwaqa ezizakuthi zixhamle nekubalwa kuzo iNgwegweni, iNkanji, iLubaleko kwakunye neSipolweni.
USodolophu uthethe wathi, “abahlali balendawo bebesebenzisa imizila emide ukufikelela kwinkqubo zabo zemihla ngemihla, kodwa lonto ngoku yinto kandalashe. Kuba le bholorho yodidi okwenziwa kwayo kuziintsimbi, kwakunye nesamente izakwenza izinto lula, nditsho imfuyo, iimoto, abahamba ngenyawo baza kuphelelwa lixhala ukusukela ngoku”. UMasipala uyaqhuba nokuqinisekisa ukuba abahlali bayazifumana iinkonzo zonke ngokukhawuleza nangokugqibeleleyo.